Ee, m ga-eme. Emechara m hapụ Compendium Blogware. Na-ada ụda jọgburu onwe ya, ọ bụghị ya? Chụpụ a na-enwekarị echiche na-adịghị mma - mana ọ bụghị n'okwu a!
Ọ bụ ezie na m na-apụ ọrụ na Compendium - Agaghị m ahapụ Compendium Blogware. N'ezie, Compendium bụ onye ahịa mbụ nke DK New Media, LLC - ụlọ ọrụ ọhụrụ m. Ebu m onye na eketa oke na Compendium - ebe mu na ndi ozo no ụlọ ọrụ kemgbe mmalite ya. Aga m aga n'ihu iji hụ na Compendium na-aga nke ọma, gaa n'ihu nag Chris na Ali maka atụmatụ na nkwalite :). M na-launching onwe m gị n'ụlọnga n'okpuru Compendium… ọzọ na na mgbe e mesịrị.
Igodo nke mgbanwe m site na Compendium bụ na a na-enye ndị ahịa ihe nlebara anya kachasị mma ma na-ebufe ihe ọmụma. Mụ na ndị ọrụ nkwukọrịta anyị na-arụkọ ọrụ nke ọma, ọganiihu ndị ahịa na ndị otu ahịa iji hụ na nke a mere - ọ ga-abụ aka rue ọnwa Disemba.
Ihe ikpo okwu na akụrụngwa - ekele maka ọhụụ nke Blake Matheny na ndị otu ya - dị mma karịa ihe ọ bụla ọzọ m hụtụrụla. Companylọ ọrụ ahụ nọ n'ọkwá ka ọ baa ụba, na-enweghị obi mgbawa na ihe mgbu niile ị nụrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị ọzọ. Oge eruola ka ọnụọgụ ndị ahịa chọrọ ịba ụba nke ikpo okwu na itinye ọdịnaya maka usoro inbound ahịa.
Mụ na Chris, Ali na m ghọtara ọnwa ndị a. Ohere maka DK New Media ka ha buru ogwe aka ohuru ndi kompenidium na ulo oru ndi ozo iji nyere ndi ahia aka ka ha tinyekwuo ego na ntinye akwukwo, mgbasa ozi ndi mmadu, nyocha, email, wdg. M na Ali na-arụkọ ọrụ ọnụ na Compendium iji mepụta ngwungwu maka ndị ahịa, site na Social Media Integration, Call-To-Action Design and monitoring program, Blog Design and Integration, Annual Strategic Consulting, wdg.